Tsy fisiana toerana fampinonoana: azo itarainana eny amin’ny sampana fanaraha-maso ny asa | NewsMada
Tsy fisiana toerana fampinonoana: azo itarainana eny amin’ny sampana fanaraha-maso ny asa
Minisitera efatra: ny Raharaham-bahiny, ny Asam-panjakana, ny Fahasalamana ary ny Fampianarana teknika ihany aloha, hatreto, ny minisitera sakaizan’ny zaza manana toerana manokana ahafahan’ny vehivavy miasa mampinono ny zanany ao am-piasana, isan’andro. “20 ny orinasa tsy miankina nanaja ny lalàna voalazan’ny lalàn’ny asa ka nanokana efitra mifandraika amin’izay. Nisy orinasa efatra vaovao hafa niditra amin’ny ara-dalàna ary efa sakaizan’ny zaza ihany koa, nanomboka tamin’ity Herinandron’ny fampinonoana ity”, hoy ny tomponandraikitry ny sampandraharaha momba ny fanjarian-tsakafo ao amin’ny minisitera, Raveloarisoa Blandine, teny Mahamasina, omaly. Tokony hametraka fitarainana eny anivon’ny fanaraha-maso ny asa ny vehivavy mpiasa mahatsapa fa tsy misitrakak ny zo hampinono ny zanany mandritra ny 15 volana aorian’ny niterahany. Adiny iray isan’andro ny zo hampinono ho an’ny vehivavy miasa. Any amin’ny toerana manokana ao am-piasana izy no mampinono raha misy mampiasa vehivavy mihoatra ny 25 ilay orinasa.
Aorian’ny fametrahana fitarainana, midina ifotony ny tomponandraikitry ny fanaraha-maso ny asa mijery ny zava-misy marina ary mandray ny fepetra hanasaziana ny tompon’ny orinasa tsy manaja lalàn’ny asa.
Omaly, nisy fanentanana sy fampahafantarana ny lalàna momba ny fametrahana orinasa sakaizan’ny zaza. Ho an’ny mpampiasa sy ny mpiasa ny hetsika izay nialohavan’ny filaharana nanehoana ny maha zava-dehibe ny fampinonoana ny zaza vao teraka hatramin’ny enim-bolana. Niarahan’ny ONG sy ny fikambanana maro ny hetsika: ny ONN, ny ACF, ny OMS ary ny minisiteran’ny Fahasalamana.
Mbola adihevitra lehibe ny momba ny andro tsy iasana aorian’ny fiterahana izay tokony ho enim-bolana raha tiany ny hampinono tsy misy fangarony ny zaza.